हाम्राे पिपलबाेट » विश्वकप फुटबलमा नेपाली सेलिब्रेटी काे कसको पक्षमा ? विश्वकप फुटबलमा नेपाली सेलिब्रेटी काे कसको पक्षमा ? – हाम्राे पिपलबाेट
विश्वकप फुटबलमा नेपाली सेलिब्रेटी काे कसको पक्षमा ?
यतिबेला नेपाल मात्रै नभएर विश्वभर नै विश्वकप फुटबलको माहोलले तातेको छ। नेपाल विश्वकपमा सहभागी नभए पनि सहभागी देशका टिमहरुलाई समर्थन र विरोधले यहाँको माहोल तात्ने गरेको छ। त्यसैलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो टिमको समर्थन र अरु टिमको विरोध गर्नेदेखि लिएर व्यक्तिगत रुपमै गाली गलौजसम्म उत्रने सम्मका गतिविधि भैरहेको पाइन्छ।
मनमा अर्जेटिनामा : सीताराम कट्टेल (कलाकार)
मलाई विश्वकप भन्दा पनि अहिले वीर अस्पताल लागेको छ(हाँस्दै) त्यसमा नै अलि व्यस्त छु। तर यति सञ्चारमाध्यमा अनि ठाउँठाउँ विश्वकपको माहोल छाइरहँदा अलि चासो बढेको छ नै। म चाहिँ अर्जेन्टिनाको फ्यान अनि खेलाडीमा मेस्सी। अर्जेटिनासँग न त नाता पर्छ न त अरु कै तर पनि खै के भएको भाव अनि झुकाव चाहिँ उ प्रति नै आउने।सन् १९९८ मा वोल्डकप हेर्दा फस्ट गेम नै अर्जेन्टिनाको हेरेको थिएँ। त्यतिबेला देखि नै अर्जेटिनाले मेरो मनमा छाप छोडेको थियो। धेरै खेलाडीहरुलाई चिनेपनि चासो राखेपनि मनचाहिँ मेस्सी तर्फ ढल्केको छ। कुन्जनाको त धेरै टिमको समर्थक हुन सक्छिन् सायद। आज एउटाको समर्थक हुन्छिन् भने अर्कोदिन अर्कोको भैराखेको हुन्छिन्। म भन्दा पनि उनी चाहिँ यो विश्वकपमा अलि बढी नै उत्साहित छिन्।
फाइनलमा बाजी लगाउने गरेकी छु : झरना थापा (अभिनेत्री)
जसले धेरै गोल हान्यो उसकै समर्थक : सौगात मल्ल (अभिनेता)
जुन टिमले राम्रो खेल्छ उसकै समर्थक : विपीन कार्की (अभिनेता)
कुनै पनि गेम मिस गर्दिनँ : श्वेता खड्का (अभिनेत्री)
म फुटबलको एकदम शौखिन हो। झन् विश्वकपको कुनै पनि गेम मिस गर्दिनँ।अर्को दिन रिपिट टेलिकास्ट हुेर्नुभन्दा पनि लाइभ नै हेर्न मज्जा लाग्छ। घरमा भाइबहिनीले जर्सी किन्छन् मलाई पनि रहर लाग्छ,लगाउने गरेको छु। म चाहिँ फाइनल गेमतिर बाजी राख्छु र अहिलेसम्म मैले बाजी हारेको कुनै रेकर्ड छैन। यो पाली के हुन्छ थाहा भएन । जस्तोसुकै व्यवस्तताका वावजुद पनि फुटबल हेर्ने समय निकालिहाल्छु। रातभर फुटबल हेर्यो दिउँसो अफिसमा मा निदाइ निदाइ काम पनि गरेको छुँ। मलाई चाहीँ अजेर्टिना मनपर्छ। अनि खेलाडीमा मेस्सी र रोनाल्डो पनि मनपर्छ।
बच्चैदेखि अर्जेन्टिनाको फ्यान : केकी अधिकारी (अभिनेत्री)